Ubuzwe St Lucia - Amaphrojekthi Wezezakhiwo - Ongashadile
Ubumenyezi uSanta Lucia - Amaphrojekthi wezezakhiwo - umfakisicelo oyedwa
Ubuzwe Saint Lucia - Amaphrojekthi Wezezakhiwo
IKhabinethi yaboNgqongqotjhe izokutjheja amaphrojekthi weentengo zeentengo azakufakwa hlangana nehlu elivunyiweko lokuba liSewula Afrika yiHlelo lokuTjala iiMali. Amaphrojekthi wempahla evunyelwe awela ezigabeni ezimbili ezibanzi:
Amahhotela nezindawo zokudlela eziphakeme kakhulu
Izakhiwo ze-boutique eziphakeme kakhulu
Uma usuvunyelwe, iphrojekthi yezezakhiwo iyatholakala ekutshalweni okufanelekile kwabafakizicelo bobuzwe ngokutshala imali.
Umfakisicelo kudingeka ukuthi enze isivumelwano esibophezelayo sokuthenga nokuthengisa sokutshala imali kuphrojekthi evunyelwe yezindlu. Ukutshalwa kwezimali, okulingana nentengo okuvunyelwene ngayo, kufakwa kwi-akhawunti evunyelwe engashintsheki yokuphathwa ephethwe ngokuhlanganyela ngunjiniyela kanye ne-Citizenship by Investment Unit eSaint Lucia.
Lapho isicelo sobuzwe ngokusebenzisa imali otshaliwe kuphrojekthi yezezakhiwo sesamukelwe, kudingeka lokhu kutshalwa kwezimali okuncane okulandelayo:
Isicelo Esikhulu: US $ 300,000
Emuva kubuyiselwe eSaint Lucia